အချက်အချာကျသောကုန်းတွင်းပိုင်းကုမ္ပဏီများအားဖွဲ့စည်းခြင်းကုမ္ပဏီများဖန်တီးခြင်းအာဖရိကနှင့်အမေရိကအာရှဥရောပသမုဒ္ဒရာကျွမ်းကျင်သူများအွန်လိုင်းကုမ္ပဏီများဖန်တီးခြင်း Fidulink ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများကမ်းလွန်လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲများဖွဲ့စည်းခြင်းအွန်လိုင်းတွင်ဖန်တီးခြင်း
ဇူလိုင်လ52021
သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေမှာကုမ္ပဏီများမှ overtax မလိုချင်သောခုခံနိုင်သည့်နိုင်ငံကိုးနိုင်ငံအားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွန်ကောက်ခံသည်။
ကြာသပတေးနေ့တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခွန်အကောက်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့အနိမ့်ဆုံးအခွန်သစ်ကိုသဘောတူလက်ခံသောနိုင်ငံ ၁၃၉ ခုအနက် ၉ ခုမှာပျောက်ဆုံးနေသည်။ ၎င်းတို့အနက်သုံးခုမှာဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များ (အိုင်ယာလန်၊ ဟန်ဂေရီ၊ အက်စ်တိုးနီးယား)၊ နှစ်ခုမှာအာဖရိကနိုင်ငံများ (ကင်ညာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား) နှင့်နှစ်ခုမှာဘဏ္fiscalာရေးခိုလှုံစရာနေရာများဖြစ်သည် (ဘာဘေးဒိုးစ် - ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရန်းဒီနာများ) ။
နည်းပညာနှင့်အခွန်အကောက်များ G7 အခွန်သဘောတူညီချက်
စနေနေ့တွင် G7 သို့တက်ရောက်ခဲ့သည့်အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီနှင့်အခြားနိုင်ငံများက GAFAM ကဲ့သို့သောနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများမှငွေကြေးအမြောက်အမြားထုတ်ယူရန်နှင့်အမြတ်အစွန်းများကိုအခွန်နည်းသောကမ်းလွန်ရေနံများသို့လွှဲပြောင်းရန်သူတို့၏မက်လုံးများကိုလျှော့ချရန်မှတ်သားဖွယ်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည် အခြိနျအခြိနျကာလအခြိနျတှငျကမ်ဘာ့အခွန်စည်းမျဉ်းများ ...
အက်စတိုးနီးယားရှိ Crypto Exchange လိုင်စင်! အဘယ်အရာကိုမျိုးကွဲများအတွက်ပြောင်းလဲစေ
အက်စ်တိုးနီးယားရှိ Crypto-Exchange လိုင်စင်။ ဤတွင် Wallet Manager Crypto-Exchange လိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်အခြေအနေအသစ်များဖြစ်သည်။ အက်စတိုးနီးယားရှိ Crypto-Exchange လိုင်စင် (သို့) Wallet Manager သို့မဟုတ် E-Wallet လိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်အချက်အလက်များကိုသင်ရှာဖွေနေသည်။ FiduLink.com သည်၎င်း၏ဖောက်သည်များအားငွေကြေးသို့မဟုတ်အခြားလိုင်စင်များရရှိရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်အမြဲထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံအလိုက်ဒီမိုကရေစီအညွှန်းကိန်း! 2020 အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း! အသစ်
ကမ္ဘာပေါ်တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီ၊ ဌာနခွဲ (သို့) လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင့်အားကူညီနိုင်သောတိုင်းပြည်တစ်ပြည်အားဖြင့်ဒီမိုကရေစီအင်အားသုံးဒီမိုကရေစီအကြောင်းဇယားတစ်ခုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီဒီမိုကရေစီညွှန်းကိန်း ၁၀ ခုအနက် ၈ ခုထက်ကျော်လွန်သောဒီမိုကရေစီအပြည့်အ ၀ ရှိသောနိုင်ငံ ၄ ခုကိုခွဲခြားနိုင်သည်။
2021 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ! ယူအက်စ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖန်တီးပါ
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ယူအက်စ်တွင်ထိပ်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၀ ​​ခု သငျသညျ 10 ခုနှစ်တွင် USA တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်! ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသိသင့်သောအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖော်ပြပါမည်။ Fidulink.com သည်၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုအမေရိကန်ရှိကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်ဒေသတွင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 8 2021
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဟန်ဂေရီတွင်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်သည်နေထိုင်သူမဟုတ်သောဒါရိုက်တာတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အချိန်ကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်
သင်ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်၊ လုပ်ငန်းရှင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်၏ကုမ္ပဏီကိုဟန်ဂေရီတွင်တည်ထောင်လိုသည်၊ ကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သင့်စီးပွားရေးကိုလုံခြုံစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်အချက်အလက်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဟန်ဂေရီတွင်သင်၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့စတင်ချင်သည်ကိုသင်၏စီးပွားရေးပုံစံကိုဖန်တီးပြီးပြီလား။ ဟန်ဂေရီမှာမင်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုသာ ...
FiduLink အဖွဲ့အွန်လိုင်းကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းတွင် online ကုန်းတွင်းသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများဖန်တီးမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် Expert Legal Firm
ဇန်နဝါရီလ72021